मुम्बई एयरपोर्टमा कुकुरले गर्छ मानिसको उपचार !
एजेन्सी । सबैभन्दा वफादार प्राणी मानिन्छ कुकुर । यसको भूमिका यतिमा मात्र सीमित छैन । कुकुरलाई अनेक तालिम दिएर अनेकन काममा प्रयोग गरिएको हुन्छ । कुकुरलाई अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग गर्ने चलन समेत विश्वका धेरै मुलुकमा छ । भारतको मुम्बई एयरपोर्टमा २४ सै घण्टा तैनाथ कुकुरहरुको भूमिका चाहि केही फरक छ । त्यहाँ राखिएका कुकुरहरुले एयरपोर्टमा...
एउटै पाइनएप्पलको मूल्य कारभन्दा महंगो !
काठमाण्डौ । पश्चिमा देशमा पाइनएप्पललाई निकै उत्कृष्ट फल मानिन्छ । यो फललाई ती देशहरुमा ‘शाही फल’को संज्ञा समेत दिने गरिन्छ । पाइनएप्पललाई जताततै साधारण रकम तिरेर खरीद गर्न सकिन्छ । तर हामी यहाँ तपाईंलाई जुन पाइनएप्पलको कुरा गरिरहेका छौ, त्यो साधारण होइन । किनभने यसलाई उब्जाउन विशेष टेक्निक र टिमको जरुरत पर्छ । यसको मूल्यले त झन् यसलाई...
पाकिस्तानीदेखि ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीसम्म बिक्रीमा ! टेण्डर भर्नेको तछाडमछाड
काठमाण्डौ । प्यानमा(पनामा) पेपरबाट लिक भएको सूचनासँगै देशभित्रै कडा आलोचनाको शिकार भइरहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई अनलाइन सपिङ वेबसाइट ‘इबे’ले बिक्रीका लागि राखेको छ । यो खबर सार्वजनिक भएसँगै यसको सामाजिक सञ्जालमा निकै धेरै चर्चा भइरहेको छ । इबे वेबसाइटमा यसप्रकारले नेता नै बिक्रीमा राखिएको र बोलकबोल गर्न आग्रह...